Izindaba - Kungani kusetshenziswa ithusi kwizithombe ezibaziweyo
Kungani kusetshenziswa ithusi kwizithombe ezibaziweyo
Isifanekiso sethusi sinesikhathi eside esingagcinwa futhi sigcinwe kangcono eminyakeni engamakhulu. Uma uqhathanisa nezinye izifanekiso ezibaziweyo, isithombe sobhedu naso sinomlando omude, akunjalo? Siyazi ukuthi ukusikwa kwebronze kungenziwa kube ngesibalo, ukwakheka kwezilwane njll., Ngenxa yezidingo zemininingwane ekhethekile. Ngakho-ke umdwebi wobazi uzoqoka lesi sithombe sethusi ukudala isithombe esibunjiwe sethusi sanamuhla.
Umbazi wesimanje wobuciko ungenziwa ngethusi, i-fiberglass, insimbi engenasici, insimbi ye-corten yensimbi nokunye. Singasho ngokwezidingo zakho ezikhethekile ukwenza ngokwezifiso isithombe, kepha futhi kudingeka sisekele izindawo zokwakha noma zohlelo lokusebenza ukuncoma izinto ezifanele amaklayenti ethu.
Sinesipiliyoni sokulingisa sokubaza okungaphezulu kweminyaka engu-13, ngakho-ke kungani ungaxhumani nathi uma ufuna ukuthola lokhu, ngiyabonga! Umbukiso wensimbi eyenziwe ngokwezifiso muhle kakhulu futhi noma yimuphi umbala uyatholakala kithi uma usisazisile izidingo zakho. Kungani ungaxhumani ngokushesha, ngiyabonga!
IPIEDRA (XIAMEN) ISCULPTURE CO., LTD.is etholakala eXiamen City, eSifundazweni SaseFujian, eChina.Senze lonke uhlobo lwezithombe zobuciko zensimbi nezithombe zesithombe iminyaka engaphezu kwe-10. Imikhiqizo yethu ifaka isithombe esikhulu sangaphandle, isithombe esibaziwe engadini, isithombe esiqoshwe epaki, isithombe sedolobha njll.
Sikhetha izinto ezibonelela imvelo njengezinto eziyinhloko, njengensimbi engagqwali, ithusi, i-fiberglass impahla.Zinhle ngomhlobiso ongaphandle nangaphakathi. Ngakho-ke isetshenziswa kabanzi emkhakheni wethu wokwenza ezibaziweyo.
Sikholelwa ukuthi singanikela ngentengo engcono kakhulu kanye nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kumakhasimende ethu, futhi ukhethe thina uzothola okungcono kakhulu. Sicela uxhumane nathi njengoba ngezansi, ngiyabonga!
Umthengisi: Nks. Cathy
Ucingo: + 0086-13950110440，+86 592 5970572
Uhlelo lokusebenza lweWhats: 0086-13950110440
Facebook: 0086-13950110440 (noma isithombe sikaCathy)
Kuxhunyiwe Ku: Cathy isithombe